Fambolena sy fiompiana silicone boribory fiasana SILIA-2001 Fambolena sy Pricelist | honneur
Agricone sisan'ny fambolena sy fihenam-bidy SILIA-2001
SILIA-2001 Agnostika miparitaka sy manondraka
Fihenjanana ny maso （25 ℃ ， 0.1% ， mN / m） ： <21
SILIA-2001 Agrikana momba ny fambolena sy fihenam-boly
dia polyzer trisiloxane novaina ary karazana surf silant silione manana fahaiza-miparitaka mahery ary miditra ao. Mahatonga ny fihenan'ny rano eo ambany mandritry ny 20,5mN / m amin'ny fitrandrahana 0.1% (wt.). Aorian'ny fangaro miaraka amin'ny vahaolana amin'ny pestisida amin'ny ampahany sasany, dia afaka mampihena ilay anjely fifandraisana eo anelanelan'ny tsiranoka sy ny voany, izay afaka mampitombo ny fitetezana ny tsofoka. Ankoatra izany, SILIA-2001 Fambolena Silicone
Ny fampielezana sy ny penetrating Agent dia afaka manamboatra ny pesticide amin'ny alàlan'ny ravina ravina ny pesticide, izay tena mahomby amin'ny fanatsarana ny fahombiazana, ny fampihenana ny famonoana ny pestisma, ny fitahirizana ny vidiny, ny fampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana vokatry ny pesticides.
 Fitehirizam-bokatra ambany
 Tendrombohitra rahona avo
 Ny foam-bolo ambany
 Mba hampihenana ny fatra amin'ny mpitrandraka agrichemical.
 hampitomboana ny fandrakofana ny agrichemical
Ny fisehoana Tsy misy loko hamoaka ranon-jiro
Fahasamahana （25 ℃ ， mm2 / s） 25-50
Fihenjanana ny maso （25 ℃ ， 0.1% ， mN / m） <21
Tendron'ny rahona （1% wt ， ℃） <10 ℃
Ampiasaina ho toy ny spray adjuvant: SILIA-2001 dia afaka mampitombo ny fandrakofana ny mpitrandraka, Vpromote the
manaitra sy mihena ny fatran'ny mpandrindra famonoana. Ny SILIA-2009 no mahomby indrindra rehefa
Ny fifangaroan-drongony dia
ii) amboary ny fangaro mifangaro avy hatrany
mampiasa na ao anatin'ny 24h fanomanana.
Ampiasaina amin'ny fangaro mifangaro amin'ny amponga
Amin'ny ankapobeny, ampio ny SILIA-2001 (4000times) 5g isaky ny rano 20kg. Raha toa ka mila ampiroborobo ny adsorption ny pestisma systemic, ampitomboina ny asan'ny pesticide na hampihena ny habetsaky ny famafazana dia tokony hampidirina amin'ny fomba tsara ny habe amin'ny fampiasana. Amin'ny ankapobeny, ny vola dia toy izao manaraka izao:
Mpanolotsaina fampiroboroboana ny tanimboly 0.025% ～ 0.05%
Famonoana olona 0.025% ～ 0.15%
Pestisida 0.025% ～ 0.1%
Bactericide 0,015% ～ 0.05%
Ny singa sy ny trace 0.015 ～ 0.1%
Rehefa ampiasaina dia avereno aloha ny pesticide, ampio ny SILIA-2001 aorian'ny fampangaroana ny rano 80%, avy eo ampio rano amin'ny 100% ary afangaro amin'ny fanamiana. Torohevitra fa rehefa mampiasa Agric Silicone Spreading and Penetrating Agent, dia mihena ho 1/2 amin'ny normal (soso-kevitra) na 2/3 ny salan'isan'ny rano, mihena ho 70-80% amin'ny mahazatra. Ny fampiasana ny zipo kely aperture kely dia hanafaingana ny hafainganam-pandeha
200Kg, 1000Kg, na larona plastika 20Kg, na mangataka mpanjifa.
Ny fitahirizana sy ny talantalana
Rehefa voatahiry ao anaty fonosana tany am-boalohany amin'ny afovoany -20 ° C ary + 50 ° C,
SILIA-2001 dia azo tehirizina mandritra ny 12 volana manomboka amin'ny fotoana nanamboarana azy (daty lany daty).
Mifanaraka amin'ny toromarika fitahirizana sy daty lany daty voatondro ao anaty fonosana. Tamin'ny datin'ity daty ity, ny Shanghai Honneur Tech dia tsy manome toky intsony fa mahatratra ny fepetra voafaritra ny varotra.
Previous: Mora mifangaro amin'ny menaka lubricating isan-karazany
Manaraka: Agricone sisan'ny fambolena sy fihenam-bidy SILIA2008